တစ်ဦးကဥရောပလမ်းကြောင်း Planner ကဥရောပတလွှားကသင်၏ရထားခရီးစည်းရုံးရေးအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, ကျော်ရှိပါတယ် 10,000 တဦးတည်းဥရောပတိုက်တွင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နေရာများ. ခရီးစဉ်၏နံပါတ်ကြောင့်, သင့်ရဲ့ခရီးသွား map ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာရန်အရေးကြီးပါသည်က. သငျသညျဖြစ်ကောင်းချင်…
တိုက်ကြီးသေးငယ်သည်ကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနား, ဥရောပခရီးသွားအမျိုးအစားတိုင်းအဘို့အရာတစ်ခုခုကိုကမ်းလှမ်း - ပါဝင်သည်အရသာကိုက်. ဒါပေမယ့်ဘယ်မှာသင့်ရဲ့အရသာဘူးသီးအများဆုံးနှစ်သက်သောပါလိမ့်မည်? What meal pic will have your Instagram racking up 100’s of likes? အံ့သြရပ်တန့်ခြင်းနှင့် munching စတင်ရန်….
ရထားဖြင့်ဂျီနိုအာ မှစ. Florence ရန်ခရီးသွားလာ
ဂျီနိုအာ, ရောမမြို့နှင့် Florence ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအရာဖြစ်ပါသည်, အီတလီနိုင်ငံရဲ့ Tuscany ဒေသ၏မြို့တော်ဖြစ်သောဖြစ်ပါသည်, are popular tourist destinations and hence the route from Genoa to Florence is popular and frequently traveled route andadistance that can be communicated with ease. ဂျီနိုအာ…
တစ်ဘူတာသို့ဆွဲရထား၏ whooshing သံကို, နှင့်ပေါ်ရတဲ့နှင့်တစ်နေရာရာကိုသွား၏ဖြစ်နိုင်ခြေလုံးဝမျှော်လင့်မထားတဲ့. သငျသညျနာမည်ကြီးများနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာရထားလမ်းကြောင်းများထက် သာ. ကောင်း၏ဘာမှစဉ်းစားနိုင်သလား? ရထားခရီးသွား၏ရွှေခေတ်တစ်သတိပေးချက်ဖြစ်ကြောင်း. When people…
ရထားမသက်ဆိုင်ရာသီအီတလီမှာခရီးသွားလာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း. သို့သျောလညျး, သူတို့ကဘေးကင်းနှင့်ပိုပြီးအဆင်ပြေ option ကိုဖြစ်သက်သေပြ, အထူးသဖြင့်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအတွင်းမှာ. အီတလီမှာဆောင်းရာသီမီးရထားခရီးသွားလာသာဘေးကင်းလုံခြုံမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်လည်းအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အထိရောက်မယ့်. This article was…
တိုင်းစစ်မှန်တဲ့စပျစ်ရည်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဥရောပ၌စပျစ်ရည်ကိုမြို့ကြီးများတတ်နိုင်နှင့်အံ့သြဖွယ်သောစပျစ်ရည်ကိုပူဇော်သိတယ်. ပြင်သစ်ကနေအီတလီ, နောက်ထပ်, အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဝိုင်ရှိသည်ဖို့အများကြီးအားဖြင့်ဖော်ထုတ်နေကြ. စိတျအပိုငျးမှာတော့, this is due to the ideal climate growing…
တစ်ဦးညင်ညင်သာသာရွေ့လျားရထားပေါ်တွင်အိပ်ပျော်ကျသွားနှင့်သင့်လိုရာခရီးမှာနောက်တစ်နေ့နံနက်နှိုးထက်မပိုကောင်းသောခံစားမှုရှိတယ်, တောင်စောင်းကနေမျှသာမိနစ်. ဥရောပမှာ, ရထားနှင့်လာရောက်လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းများကိုရှာဖွေသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေးချယ်မှုအတွက်လုိုအပ်သည်. It’s not…
ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးဆောင်းရာသီပွဲတော်များသွားရောက်ခြင်းအားဖြင့်အအေးရာသီ၏အများဆုံး Make. အဆိုပါပွဲတော်များနှင်းလျှောစီးနှင့်စနိုးဘုတ်စီးခြင်းကနေသီချင်းအရာအားလုံးပါဝင်ပတ်သက်နေ, ပြဇါတ်, ရေခဲပန်းပု, နှင့်ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ပွဲတော်စစ်ရေးပြ. အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းဖြစ်ပါသည်5roundup of what you’ll find happening across Europe…